Hoteellada Thailand: Halka ay raggu ka taliyaan muuqaalka GM | Thailand
Location: Bogga ugu weyn » Soo dirida » Dalka | Gobolka » Thailand » Hoteellada Thailand: Halka ay raggu ka taliyaan muuqaalka GM-ka
Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • News • Thailand • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka
Hoteellada Thailand: Halka ay raggu ka taliyaan muuqaalka GM-ka
Lahaanshaha sawirka Phuket Hotels Association
Daraasad ayaa shaaca ka qaaday in 90% maamulayaasha guud ee hoteellada Thailand ay yihiin rag inkastoo xaqiiqda ah in warshadaha ay ka buuxaan dumar aqoon sare leh oo maamuleyaal ah. Munaasabad muhiim ah oo soo dhaweyn ah oo ka dhacday Phuket ayaa ujeedadeedu ahayd in la fahmo sababta ay haweenku wali ula kulmaan caqabadaha hor-u-marin xirfadeed iyadoo sinaanta jinsiga ay sare u kacday ajendaha hoteellada Thai.
Waxaa lagu martiqaaday Dusit Thani Laguna Phuket, "Maskaxda The Gap" waxay soo ururisay in ka badan 100 ergo warshadeed si ay wax uga qabtaan caqabadaha ay la kulmaan haweenka huteelada ah ee Thailand. Iyadoo inta badan kooxaha huteelada ay leeyihiin siyaasado ballaadhan oo lagu hubinayo isku-dhafka iyo kala duwanaanta, iyo in kasta oo xaqiiqda ah in haweenka lagu soo warramey inay ka badan yihiin 53% shaqaalaha martigelinta caalamiga ah¹, cilmi-baaris dhowaan ay samaysay C9 Hotelworks ayaa lagu ogaaday in 90% maamulayaasha guud Hoteelada Thai waa rag. Tani waxay ka dhigan tahay in meel ay weheliyaan wadooyinkooda xirfadeed, haweenku waxay garaacayaan saqafka muraayadda.
Tani maaha dhibaato u gaar ah Thailand. Dhab ahaantii, Thailand guud ahaan waxaa lagu tiriyaa in ay ka mid tahay wadamada aduunka ugu horumarsan dhanka sinnaanta jinsiga. Rubuc ka mid ah (25%) shirkadaha Fortune 500 ee boqortooyadu waxay haweenku ku leeyihiin jagooyin hoggaamineed, marka la barbar dhigo 8% oo keliya adduunka.
Laakiin waa maxay sababta, Qarnigii 21-aad, ay tirooyinkani ugu sii ahaanayaan kuwa aan sinnayn qaybta hoteelka iyo maxay tahay tillaabooyinka ay shirkaduhu u baahan yihiin inay qaadaan si ay u kordhiyaan awoodda saaxiibadooda dumarka ah? Ma qaab-dhismeedka taageerada saxda ah ee loo sameeyay haweenka si ay isugu dheelitiraan xirfadda qoyska? Waxaa kaloo ka sii welwel badan, warshadaha huteelada weli ma saameyn ku leeyihiin cuqdadyadii hore, iyadoo dheddigga awoodda leh loo arko inay yihiin "riix" ama "hami badan"?
In ka badan 100 ergo – rag iyo dumar – ayaa joogay
Mind The Gap waxa ay su’aalahan muhiimka ah kaga hadashay doodo iyo aqoon-is-weydaarsiyo isdaba-joog ah oo ay ku dadaalayeen sidii looga hortegi lahaa fikirka dhaqanka iyo in la abuuro xalal la taaban karo. Ka soo qayb galayaasha waxaa ka mid ahaa qaar ka mid ah haweenka ugu caansan ee hormuudka ka ah warshadaha, oo ay ku jiraan aasaasayaasha shirkadaha, agaasimayaasha iyo hoteelada GM, kuwaas oo intooda badan ay la kulmeen takoorid intii ay ku jireen xirfadahooda. Waxa ku biiray ardayda soo dhawaynta iyo qalin jebiyayaasha kuwaas oo si sax ah uga walaacsan la kulanka arrimaha ay ka mid yihiin farqiga mushaharka jinsiga iyo galmada marka ay soo galaan warshadaha.
Mawduucyada waxaa ka mid ahaa horumarinta waddooyinka shaqada ee doorarka hoggaaminta sare, taageerada iyo agabka ay heli karaan haweenka ku jira warshadaha martigelinta, qiimaha la-talinta iyo waxbarashada, sida loo ilaaliyo fayoobida maskaxda, iyo gaarista dheellitirka shaqada-nolosha togan. Munaasabadan oo socotay nus-maalin ayaa waxaa ka hadlay Bill Barnett, oo ah aasaasaha & Agaasimaha Maamulka C9 Hotelworks, waxaana daadihinayay Sumi Soorian, Agaasimaha Fulinta ee CXNUMX. Hoteellada Phuket Ururka.
"Waa wax laga xishoodo in aan weli ka hadlayno mawduucan qarniga 21-aad."
Sumi Soorian, oo ah Agaasimaha Fulinta ee Ururka Huteelada Phuket, ayaa sii wadata: “Takoorka jinsiga waa in aanu maanta ka jirin adduunka; Waxaan leenahay hogaamiyeyaal dumar ah oo adduunka ah oo guuleysta iyo siyaasiyiin, madaxweynayaal shirkado iyo agaasimayaal, samafalayaal, saynisyahano iyo qaar kaloo badan. Dumarku uma baahna inay is caddeeyaan mar dambe. Ilaa hadda, sagaal ka mid ah tobankii hudheelba maamulayaasha guud ee Thailand waa rag. Waa maxay sababtu? Martigelinta 'Maskaxda The Gap', waxaan rabnay inaan riixno ajandaha jinsiga, weydiino su'aalo adag oo ku qasbo shirkadaha inay ogaadaan. Haweenka da'da yar ee maanta soo galaya warshadaha waxay u baahan yihiin inay dareemaan awood iyo dhiirigelin; waxay u baahan yihiin inay ku raaxaystaan ​​shaqo xirfadeed oo macno leh oo bilaa dambi ah. Waxaan rajeynayaa in arrimaha maanta la soo qaaday ay ka caawin doonaan sidii ay taasi u gaari lahaayeen,” ayay raacisay.
Qaar badan oo ka mid ah wufuudda ayaa sidoo kale ka faa’iideystay fursad ay taladooda la wadaagaan haweenka da’da yar ee bilaabay xirfadda warshadaha hoteelada. Pamela Ong, oo soo bandhigtay barnaamijkeeda la-talinta haweenka, waxay kula talisay ka qaybgalayaasha inay "ka fogaato saamaynta xun oo aad ku hareeraysan tahay shabakad taageero oo wanaagsan oo asxaabta, asxaabta iyo qoyska," halka Sornchat Krainara ay ku boorisay wufuudda inay " kor ugu hadlaan [oo] is dhayalsan.” Isara Pangchen, oo deeq waxbarasho ka heshay Jaamacadda Cornell ee Barnaamijka Maareeyayaasha Guud, waxay ku dhiirigelisay haweenka "inay had iyo jeer qaataan fursad ay wax ku bartaan, wax ku bartaan oo ay horumariyaan."
Hogamiyayasha sare ee soo dhawaynta, qalin jabiyay iyo arday ayaa isugu yimid Mind The Gap kaas oo ay marti galisay Phuket Hotels Association iyadoo lala kaashanayo C9 Hotelworks, gaarsiinta Isgaarsiinta Aasiya, iyo Dusit Thani Laguna Phuket.
Warar dheeraad ah oo ku saabsan Phuket
Wax badan oo ku saabsan: Thailand | Asia | hotels | Hoteelada Thailand | Haweenka
Ku dhawaad ​​dhammaan huteelada Mareykanka waxay soo sheegaan shaqaale yaraan hotels|
U dabaal degaya Awood-siinta Haweenka ee Socdaalka iyo Dalxiiska Haweenka|
Narai Hotel Bangkok wuxuu leeyahay sheeko cajiib ah oo laga sheekeeyo Asia|
10ka goobood ee aduunka ugu nabdoon ee fasaxa qoyska Thailand|
Thailand Travel Mart Plus: Iyo dhammaan habeen wanaagsan Thailand|
Asia hotels Thailand Hoteelada Thailand Haweenka
Nederlaan waxay qaaday Talaabada Giant ee St. Eustatius ee Ilaalinta Deegaanka
Qatar Airways ayaa heshiis cusub la gashay Paris Saint-Germain
Qatar Airways Group ayaa soo bandhigtay faa’iidada ugu badan ee ay ka heshay...
Roe v Wade waxaa diiday maxkamada sare ee Maraykanka
Ku daryeesho qaar ka mid ah crickets ee jalaatada?
Wasiirka Dalxiiska Jamaica oo ku baaqay in laga soo kabsado COVID-19...
UNWTO Shirka Golaha Fulinta oo ka socda magaalada Jeddah...
Swoop wuxuu dib u bilaabay Hamilton ilaa Las Vegas
UNWTO iyo Shirarka Caalamiga ah ee Stockholm+50: Hal...
Pegasus Airlines Guddoomiyaha cusub ee Guddiga IATA
Khadka dalxiiska ee Carnival ee ugu horreeyay ee Mareykanka si uu dib u bilaabo gebi ahaanba